ပျံသန်းနေသောခွပ်ဒေါင်းတကောင်: 6/1/10 - 7/1/10
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကို စစ်အစိုးရက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းပြီးနောက် သြစတြေးလျ အစိုးရဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေနဲ့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ထိပ်တန်း အရာရှိတွေကို ဩစတြေးလျနိုင်ငံ လာရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားသလို မြန်မာနိုင်ငံကို လက်နက်တင်ပို့ ရောင်းချမှု ပိတ်ပင်ထားတဲ့ နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
မေတ္တာသည်သာ . . . .တခန်းရပ် ပြဇာတ် ( ကိုရီးယား )
MYIT TAR TI TAR from yechit on Vimeo.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်(၆၅)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်(ကိုရီးယား) ရုပ်သံမှတ်တမ်း
Posted by ကိုကိုနာရ်ဂစ် at 8:28 AM0comments Links to this post
ကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်သော ကျနော်တို့အောင်ဆန်းဘော်လုံးအသင်းသမားဟောင်း ကိုမောင်မောင်(ခ)ကိုသိန်းထိုက်အတွက်(၁)လပြည့်ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းမည့်လာမည့်တနင်္ဂနွေနေ့(၂၇၊၆၊၂၀၁၀) တွင်မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး
လာရောက်ကြပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ နံနက်(၈း၃၀)တွင် တရားနာကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by flyingpeacock at 11:58 PM0comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ( ၆၅ ) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနား ( ကိုရီးယား )
အမေ့မွေးနေ့ အတွက် Yမြစ်ချို- ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ ပြယုဂ်
သီချင်းစာသား - သူရိန်ထက် တေးဆို - Y မြစ်ချို REP စာသားနဲ့ အဆို - စိန်သွား
BAND and STUDIO- SHAMBELAR
သားရဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင် အဖြစ် လှူပါရစေ အမေ (ချစ်တဲ့သား- Yမြစ်ချို)
Uploaded by thadarmay. - News videos from around the world.
လိုချင်ရင် download ကဒီမှာလုပ်ပါ။ http://www.sendspace.com/file/2m8enb ( မသဒ္ဓါ )
Posted by flyingpeacock at 9:33 AM Links to this post
Posted by flyingpeacock at 10:13 AM Links to this post
Posted by flyingpeacock at 10:01 AM Links to this post
Invitation to All Burmese People in Korea
Posted by flyingpeacock at 9:22 PM Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏(၆၅)နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ဖိတ်ကြားလွှာ ( ကိုရီးယား )
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏(၆၅)နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ပွဲအခမ်းအနားကို လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Posted by flyingpeacock at 9:56 PM Links to this post
တကယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံသာ ပါဝင် ထောက်ခံရင် မြန်မာစစ်အစိုးရ လူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေနဲ့ စစ်ရာဇ၀တ်မှုတွေ ကျူးလွန်မှု ရှိမရှိ စုံစမ်း စစ်ဆေးပေးဖို့ ထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံဟာ ၅ နိုင်ငံ ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို အထူးစိုးရိမ်ကြောင်း နယူးဇီလန်၊ ဆွီဒင်နဲ့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွေသာ မက ကနေဒါနိုင်ငံကလည်း အင်္ဂါနေ့က ကျင်းပတဲ့ ၁၄ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by flyingpeacock at 8:11 PM Links to this post
ဒီမိုကရေစီ အဆိုရှင်ထက်အောင်ရှိုင်း၏ နေ့ သစ်ကိုကြိုဆိုကြပါစို့
သီချင်းများ၏ Zip ကို ဒီမှာယူနိူင်ပါတယ်
cover Design ကိုမျိုးလက်ရာပါ။ လွတ်လပ်စွာခံစားနားဆင်ပါ။ အကယ်၍ အခမ်းအနားပွဲများတွင် ဝေမျှ ဖြန့်ဝေလိုပါက သီချင်းများကို တေးသံရှင်၏ ဆန္ဒအရ ငွေကြေးတစ်စုံတရာဖြင့် ရောင်းစားခြင်းမပြုဘဲ အခမဲ့ထုတ်ဝေ စေလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ ရွှင်လမ်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
Posted by flyingpeacock at 5:10 PM0comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် မရရင် အမေရိကန် အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်တဦး အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားစရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ အစဉ်အလာကို အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်မ်ဝက်ဘ် ချိုးဖောက်လိုဟန်လည်း မရှိပါဘူး။ ( ဗွီအိုအေ )
Posted by အက်စ်ပီ at 10:51 PM0comments Links to this post